Samachar Batika || News from Nepal » विवाहित भएर पनि अन्य पुरुषसँग चु’म्बन गर्न हिच्किचाउँदैनन् यी बलिउड नायिका !
विवाहित भएर पनि अन्य पुरुषसँग चु’म्बन गर्न हिच्किचाउँदैनन् यी बलिउड नायिका !
बलिउडमा पनि अहिले चुम्बनका दृश्यहरुलाई सामान्य मान्न थालिएको छ। कथाले माग गरे अनुसार बलिउड नायक-नायिकाहरु कि’स सिन दिन खासै अफ्ठेरो मान्दैनन्।
विवाह गरेपछि पनि बलिउड नायिकाहरुले कि’स र बेड सिन दिने गरेको बलिउडमा पाउन सकिन्छ। विवाह पश्चात पनि कथाले मागेपछि किस सिन सिन दिने नायिका निम्न छन्।
बलिउडकै सुन्दर नायिका मध्येकी अनुष्का अभिनयमा पनि उत्कृष्ट मानिन्छिन्। अनुष्काका कयौं हिट चलचित्र छन्। कथाले माग गरे अनुसार अभिनय गर्ने भएकै कारण बलिउडमा उनको राम्रो नाम। विराट कोहलीसँग विवाह भएपछि पनि अनुष्का अभिनयमा सक्रिय छिन्। कि’स सिनको कुरा गर्नुपर्दा, अहिले पनि उनलाई कि’स सिन दिन गार्हो लाग्दैन। चलचित्रमा कथाले मागेपछि विवाहित नै भए पनि कि’स सिन दिँदा फरक नपर्ने उनको बुझाई छ।
बलिउडमा धेरै समय देखि सक्रिय करीनाले अहिले सम्म धेरै नायकसँग किस सि’न दिसकिन्। शाहिद कपूर, सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, फरदीन खान र आमिर खान जस्ता नायकसँगको चु’म्बन दृश्य दर्शकले देखिसके। विवाह पछि पनि कथाले मागेपछि कि’स सिन दिनुपर्छ भन्ने उनको मत छ। कि’स सिन बारे करीनाका पति सैफ अलि खान पनि करीनासँग सहमत छन्। उनी पनि कथाले मागेपछि विवाहित नै भएपनि फरक नपर्ने बताउँछन्।
बलिउडमा प्रवेश गरेपछि सनीले कयौ ह’ट र बो’ल्ड भूमिका निभाइसकिन्। पहिला ‘वयस्क चलचित्र’मा काम गरेर बलिउड प्रवेश गरेकी सनी अहिले पनि चलचित्रहरुमा ह’ट अवतारमा देखा पर्ने गरेकी छन्। सनी पनि कि’स सिन दिने मामलामा करीना र अनुष्काको जस्तै सोच्छिन्।
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:०८